Indlela yokusebenzisa i-Rotary Rock Tumbler ukuya kumaPoland Amatye
Uhlobo oluqhelekileyo lwe-rock tumbler yi-tumbary drum tumbler. Iphosa amatye ngokufanisa isenzo samagagasi olwandle. I-rotary tumblers iphosa amatye ngokukhawuleza kunokuba ulwandle, kodwa kusathatha ixesha elithile ukusuka emadwaleni angamaqhekeza ngamatye atyhidiweyo! Lindele ukuba inkqubo ithathe ubuncinane inyanga ukusuka ekuqaleni ukuya ekupheleni.
Sebenzisa le miyalelo njengendawo yokuqala yokuwa kwakho. Gcina iirekhodi zohlobo kunye nobungakanani beliwa kunye ne-grit / polish, kunye nobude beyinyathelo ngalinye.
Sebenzisa olu lwazi ukucwangcisa ubuchule bakho kwiziphumo ezilungileyo.
Uluhlu lwezinto zokuLungisa iLatye
Imiqobo (bonke ubunzima obufanayo malunga nomthwalo)
I-Silicon Carbide Grits (Unokongeza isinyathelo se-SiS 400 seeseshingi, ukuba unqwenela, ngaphambi kokupenda)
Iimveliso zePolishing (isib. Alumina, i-cerium oxide)
Indlela yokusebenzisa i-Rock Tumbler
Gcwalisa i-barrel 2/3 ukuya kwi-3/4 igcwele amatye. Ukuba awunayo iindonga ezaneleyo, unokongeza iiplastiki zeplastiki ukuze wenze umehluko. Qinisekisa ukuba usebenzisa ezo zipelisi kuphela zokubumba okuqingqiweyo kwaye usebenzise iipelisi ezintsha kwiinqanaba zokupholisa. Gcina ukhumbule ukuba ezinye iipeltiki zeplastiki zihamba, ngoko qinisekisa ukuba uzifake kwi- volume efanelekileyo ngaphambi kokuba ungeze amanzi.
Yongeza amanzi ukuze ukwazi ukuwubona phakathi kwamatye kodwa ungagubungeleli amatye ngokupheleleyo.
Yongeza i-grit (jonga ishati engezantsi).
Qinisekisa ukuba i-barrel yakho ehlawulwayo iwela kwisibonelelo sobunzima sokusebenzisa i-rotor.
Isinyathelo ngasinye sihamba ubuncinane ngeveki. Kwinqanaba lokuqala, susa umgqomo emva kweeyure eziyi-12 ukuya ku-24 uze uyivule ukukhulula nayiphi na i- gas buildup. Qalisa kwakhona ukuwa. Ungesabi ukuvula umqolo ngexesha elizeleyo ukuze uqiniseke ukuba i-slurry iyakha kwaye ukhangele inkqubela phambili kwinkqubo. I-tumbler ifanele ibe nesandi esivumelanayo, ingazwakala njengezicathulo ze-tennis kwisomisi. Ukuba ukuwa kwelokungafaneli, jonga umgangatho womthwalo, ukwakheka kwe-slurry, okanye umxube wezandi zamatye, ukuqinisekisa ukuba ezi zinto zilungile. Gcina amanqaku kwaye ujabule!
Vumela ukugaya (60/90 ubukhulu bamatye aqaqambileyo, qalisa nge-120/220 ngamatye athambileyo) kusebenze kude kube zonke iingcambu ezibukhali zityunjwe ngamatye kwaye zihamba kakuhle. Unokulindela ukulahlekelwa malunga ne-30% yelitye ngalinye ngexesha lokuwa, kunye nalo lonke ilahleko kule nyathelo lokuqala. Ukuba amatye awashenxwanga emva kweentsuku ezili-10, kuya kufuneka uphinda unyathelo ngesantya esitsha.
Emva kokuba isinyathelo siphelile, sukuma amatye kunye nomdongwe ngokucacileyo ukususa yonke impawu ye-grit. Ndisebenzisa i-oldbrush yamazinyo endala ukuze ndifike kwiindawo ezinzima ukufikelela kuzo. Beka bucala nawaphi na amatye aphukileyo okanye aneemingxuma okanye aphantse. Ungabongeza kwinqanaba lokuqala lomatye wamatye alandelayo, kodwa baya kunciphisa umgangatho wawo onke amatye akho ukuba uwashiye kwisinyathelo esilandelayo.
Kwinqanaba elilandelayo, uphinde ufuna ukuba amatye azalise i-barrel 2/3 ukuya kwi-3/4 epheleleyo. Yongeza iiplastiki zamapelisi ukwenza umehluko. Yongeza amanzi kunye ne-grit / polish uqhubeke. Izitshixo zokuphumelela ziqinisekisa ukuba akukho kuhlaselwa kwamanyathelo kunye nesigqibo esivela kwisinyathelo esedlule kwaye ukhuphe isilingo sokuqhubela phambili kwisinyathelo esilandelayo.
60/90 120/220 Iphoyisa Polish
1.5 # 4 T 4 T 6 T 6 T
3 # 4 T 4 T 6 T 6 T
4.5 # 8 T 8 T 10 T 10 T
6 # 10 T 12 T 12 T 12 T
12 # 20 T 20 T 25 T 25 T
Iingcebiso eziNcedo zoMoya oPheleleyo
Musa ukuyilalisa i-tumbler yakho! Esi sizathu esibangeleyo sokuqhawula ibhanti kunye nokutshiswa kweemoto. Xa ungathandabuzeki, cinga umgqomo wakho. Umgqomo womoto we-3-lb akufanele udlule ubunzima beepounds ezi-3 xa uhlawuliswa ngamatye, i-grit, kunye namanzi.
I-oyile kwi-bushings tumbler nge-drop one oil, kodwa ungayithandi! Awufuni ioli kwibhanti, njengoko oku kuya kubangela ukuba iphole kwaye iphule.
Melana nesilingo sokuxubha ngamatye okanye imikhosi. I-Grit iya kungena kule mibhobho ize ihlambele amanyathelo alandelayo, ichithe ipolish yomthwalo wonke. Ayikho inani lokutshitshiswa ngebhokisi lezinyo liza kususa yonke i-grit ngaphakathi kwimijelo!
Sebenzisa umthwalo olinganiselayo obandakanya zombini amatye amakhulu namancinci. Oku kuya kuphucula isenzo sokuwa.
Qinisekisa ukuba onke amanqaku emithinini afana nobunzima obufanayo . Ngaphandle koko, amatye atshayo aya kugqitywa ngexesha lokucoca. Ukungafani nakweli xesha xa ufuna ukusebenzisa ngamatye atshaba ukuzalisa / ukukhupha umthwalo.
Musa ukuhlamba i-grit phantsi! Kuya kudala i-clog engenakunyulwa ukucoca. Ndiyasusa amanyathelo angaphandle ngaphandle kokusebenzisa umyezo wegadi. Enye inketho kukususa i-grit kwibhakethi, ukuze ulahlwe kamva kwenye indawo ngaphandle kweplumbing yakho.
Musa ukusebenzisa i-grit. I-carlicide ye-silicon ilahlekelwa yimida yayo ebukhali emva kwexesha elidlulayo leveki kwaye ize ibe yinto engenamsebenzi yokugaya.
Unokuphinda usebenzise iiplastiki zeplastiki, kodwa qaphela ukuthintela ukungcolisa izigaba zokuphamba ngegrit. Sebenzisa iiplastiki ezihlukeneyo zeeplastiki zezi zigaba!
Ungongeza i-baking soda, i-Alka-Seltzer, okanye i-Tums kumthwalo ukukhusela i-gas build-up.
Ukulungelelanisa imilambo yomlambo okanye nayiphi na amatye angamanzi ( isib . Sodalite , fluorite , apatite ), unokushiya isinyathelo sokuqala esicacileyo.
Kuba ngamatye amancinane (ngakumbi i-obsidian okanye iinyembezi zezinyembezi), ufuna ukunciphisa isenzo sokuwa kunye nokuthintela amatye ukuba athathane xa ephosa. Abanye abantu baye baphumelela ekongezeni isiraphu yengqolowa okanye iswekile (kabini ngaphezu kwenani le-agent yepolitiki kunye nephostishing) ukukhupha i-slurry. Enye inxaxheba kukupolisa amatye omile (njengoko kungenamanzi) nge-cerium oxide kunye ne-oatmeal.
Ingaba unomdla ekusebenziseni i-tumbler yokubethelela ukuphosa amatye? Emva koko zama le miyalelo esikhundleni.
Izimpawu Uyi-Khemist Major
'Imibuzo yeTiddhartha' Kwindlela Yakhe YoKomoya
Amagama ahamba kunye neFestile